Sida looga saaro xirmooyinka agoonta ee Arch | Laga soo bilaabo Linux
Pacman Waa, shaki la'aan, mid ka mid ah maareeyayaasha xirmooyinka ugu fiican. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah maareeyayaasheeda la xidhiidha (sida Yori o Xirmada) inkasta oo ay aad u fiican yihiin, haddana waxay u reebaan in yar oo la doonayo. Gaar ahaan, adoo joogaya goyn la rakibaadda de baakadaha Iyada oo loo marayo AUR waa wax iska caadi ah ku-tiirsanaanta lagu rakibay inaan si sax ah looga saarin ka dib isku-duwidda isku-dhafka. Tani waa run gaar ahaan, tirada sare ee ku tiirsanaanta si loo rakibo.
Xalku waa mid aad ufudud: waa inaan tirtirnaa xirmooyinka agoonta ahaa (yacni, xirmo kale uma baahna waana tirtiri karnaa dhib la'aan)
Waxaan furay terminal oo waxaan ku qoray:
sudo pacman -Rs $ (pacman -Qtdq)
Waxa ay qabato waxay ka tirtirtaa dhammaan baakadaha iyo ku-tiirsanaantooda (pacman -Rs) liis xirmo gaar ah (oo, kiiskeenna, ay yihiin xirmooyinka agoonta ah, oo liiskooda laga helo pacman -Qtdq).
Kuwa ka yimaada Ubuntu, amarkani wuxuu la mid yahay sudo apt-get autoremove.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Sida looga saaro xirmooyinka agoonta ee Arch
Caado! Waxay igu habbooneyd sida gacmo gashi, waxaan sii daayay ilaa 1 GB oo qashin ah markii ugu horreysay ee aan lakulmo qaansada!
Hooska goosta dijo
Wanaagsan, waxaan sii daayay 425,85 MiB xirmo aan aniga ii shaqeyn, mahadsanid!
Jawaab Shadow Reaper
Taas bedelkeeda, taasi waa waxa aan ujeedo!
Waad ku mahadsan tahay maqaalka. Waxaan ku beddelay Openbox Cinnamon waxaanan rabay inaan nidaamka uga tago nadiif. Waxaan ku dhammaaday inaan xoreeyo meel aad u tiro badan.
Ku jawaab Quiquesiervos
Adaa mudan! Qabsoon! Bawlos.
Wanaagsan laakiin maxaa dhacaya markii Antergos iyo console-ka aan ku tuurno $ yaourt -Syua jawaabtuna waa:
:: Iswaafajinta keydka macluumaadka ...
udub-dhexaadka waa ilaa taariikhda
dheeraad ah waa la socda
bulshada waa la casriyeeyay
antergos waa mid cusub
Xirmooyinka Dibadda: / 53/53
Waan googliyey macluumaad laakiin jawaab kama helin.
Waa isku mid, yaourt waxay isticmaashaa pacman mararka qaarkood, waa waxa aan fahmay hahaha
Isla sidaas oo kale, waxaad isticmaali kartaa sudo pacman fudud -Rs $ (pacman -Qtdq) sidaasna waxaad ku iloobi kartaa dhammaan agoonta. Yaourt ahaan waa inuu jiraa foom la mid ah laakiin anigu si aad ah ugama dhex dhicin maareeyaha.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, marka wax lagu rakibo Arch adoo adeegsanaya yaourt sidoo kale waxaa aqoonsan pacman.
Waxaan ku sameeyay amarkan kale ee wax yar ka duwan:
$ sudo pacman -Rns $ (pacman -Qtdq)
In kasta oo kan aad tilmaamtay uu si fiican u shaqeeyo, haddana waan xaqiijiyey.
Waxaan aqriyay inay jiraan kuwa aan raali ka aheyn baabiinta wax xirmo agoon ah.
Waan isticmaalaa laakiin runtii ma haysto sharraxaadda amarka madax-bannaanida (ma ogtahay?) Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado
Ka jawaab alteros
Tilmaamaha si aad uga ilaaliso server-kaaga Linux weerarada dibedda